हार्दिक बधाई : अभिनेत्री रेखा थापाले यी समाजसेवी केटासँग यो मितिमा बिहे गर्दै ! - Prateek Nepal
काठमाडौं । रेखा थापाले समाजसेवी केटासँग लगनगाठोँ कस्दैँछिन् ? अभिनेत्री रेखा थापा अहिले आफ्नो नयाँ चलचित्र निर्माणको तयारीमा छिन् । यसै क्रममा चलचित्र बजारमा रेखाको बारे एउटा हल्लाले तरंग सिर्जना गरेको छ ।छविराज ओझासँग डिभोर्सपछि रेखा कसैसँग रिलेशनमा छैनन् । उनको लभ अफेयरको बारे समेत खासै कुरा मिडियामा आएको छैन ।
देतर, अहिले आएको हल्ला साँ चो हो भने रेखाले छिट्टै बिहे गर्दैछिन् । रेखाले चलचित्र क्षेत्रभन्दा थोरै बाहिरको तर समाजसेवामा क्रियाशिल व्यक्तिसँग बिहे गर्ने रेखा निकट कतिपयले अनुमान गरेको बजारमा चर्चा छ ।लामो समयसम्म एकल जिवन विताउन गाह्रो भएकाले अब रेखा बिहे गर्ने मुडमा रहेको बुझिएको छ । तर, यी सबै बजारमा चलेका गसिप हुन् ।
अबदेखि अस्पतालबाट गरिब तथा विपन्नले आकस्मिक सेवा निःशुल्क पाउने
बलिउडका ‘बादशाह’ साहरुख आज ५५ बर्षमा प्रवेश, आफ्ना फ्यानहरुलाई गरे यस्तो आग्रह !
‘सडकमा हिँड्नेलाई गणतन्त्रले शीतलनिवासमा पुर्‍याएको हो, यत्तिकै टुं’गिँदैन, संसदमा उठ्छ’
December 18, 2020 Ramash kunwar